नैतिकताबिनाको व्यापार पाप हो - Candles Khabar
गृहपृष्ठ नैतिकताबिनाको व्यापार पाप हो
चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजारमा सक्रियता बढाएको छ तर यही बेला बजारमा अनियमितताका घटना पनि धेरै भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित दुई/तीनवटा टोली बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेकामा अहिले वाणिज्यकै नेतृत्वमा दैनिक पाँच/छ टोली, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा दैनिक तीन टोली, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नेतृत्वको तीन टोली र काठमाडौँ महानगरपालिका नेतृत्वको छुट्टै टोली गरेर दैनिक १३ टोलीले उपत्यकाको बजारमा मात्रै अनुगमन गरिरहेका छन् । यति हुँदा पनि बजारमा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्नेदेखि हाकाहाकी मूल्य वृद्धि र कालोबजारीका घटना रोकिएका छैनन् । किन यस्तो हुन्छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँगको कुराकानी :
पछिल्लाे - दशैंको टीका लगाउँदा कता फर्किने ?
अघिल्लाे - थारु समुदायको मौलिक दसैं, नवमीमै सेतो टीका र सखिया नाच